Qaramada Midoobay oo cambaareeysay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG)- Xafiiska kaalmeynta howgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii dhimashada iyo dhaawaca badan geystay ee shalay ka dhacay Muqdisho.
War qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska ayaa lagu yiri “waxaan had iyo goor garab taagannahay shacabka iyo xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana weerarkaasi arxan darro ku cambaareyneynaa ereyada ugu kulul, weerarada argagixisada ee ay soo maleegayaanna maaha marna kuwo dib u dhigaya dhiirranaanta shacabka Soomaaliyeed ay ku doonayaan dhismaha dowladda iyo dib u kabashada koboca dhaqaalaha iyo amaanka”ayaa lagu yiri qoraalkan.
Ku xigeenka u qeybsanaha xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Raisedon Zenenga ayaa sheegtay in Qaramada Midoobay iyo guud ahaan beesha caalamkaba ay garab taaganyihiin Soomaaliya.
Sida ku xusan warbixinno horu dhac ah oo soo baxayana saddex baabuur oo ay ku raranaayeen walxaha qarxa ayaa lagu qarxiyay afaafka hore ee Hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho, weerarkan masuuliyaddiisa ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab.
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa tacsi u diray dhammaan ehellada iyo qoysaska ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay qaraxaas iyaga oo u rajeeyay kuwa ku dhaawacmayna caafimaad deg deg ah.
Afhayeenka Qaramada Midoobay, Farxaan Xaq oo isna ka hadlay qaraxyadii Jimcihii ka dhacay Muqdisho ayaa sheegay inay aad uga xunyihiin wixii ka dhacay Xamar wuxuuna sheegay afhayeenku in uu shacabka Soomaaliyeed tacsi uga sido xog hayaha guud ee Jumcuyadda Quruumaha Ka Dhexeysa mudane Antonio Guterres.
Khasaaraha nafeed ee ka dhashay qaraxaas ayaa inta la xaqiijiyay gaaraya in ka badan 10 qof dhimasho ah iyo afartameeyo dhaawac ah oo lagu dabiibayo isbitaallada magaalada Muqdisho
Xabaal wadareed laga helay Itoobiya